Wallström: Tijaabadii hubka ee atoomikadu waa halis nabadeed - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiirka arrimmaha dibadda Sweden, Margot Wallström. sawir: Pontus Lundahl/TT
Wallström: Tijaabadii hubka ee atoomikadu waa halis nabadeed
Walström: Xaaladda waxaa loo baahan yahay in la dejiyo.
La cusbooneeyay måndag 4 september 2017 kl 11.46
La daabacay måndag 4 september 2017 kl 10.26
Wasiirka arrimmaha dibadda Sweden, Margot Wallström ayaa dhaleeceeysay falkii tijaabada atoomikada ee uu maamulka dalka Waqooyiga Kuuriya ku tallaabsaday axaddii ina dhaaftay.
–Iyada oo lagu jiro xaalad uu maamulka mareeykanka qudhiisu uu cod dheer ugu caga jugleeynayo oo ku dhaaranayo inuu tallaabo ka qaadi doono waxay xaaladda ka sii dhigeeysaa mid aan la hubin, sida ay sheegtay wasiiradda dibadda mar ay u warrameeysay laanta wararka ee Ekot.
Dalka waqooyiga Kuuriya ayay xaaladdani ka tahay mid dhici karta, sida ay aamin-san tahay Wallström. Waqooyiga Kuuriya wuxuu ku tallaabsanayaa sidii uu ku adkeeyn lahaa quwaddiisa iyo suurtagalkiisa gorgortan. Iyada oo loo marayo golaha ammaanka ee Qarammada Midoobey waa in la helo dhabbo wada hadal oo horay looga socon karo, si looga kaaftoomo xaaladda oo ka sii darta. Golaha ammaanka ee Qarammada Midoobey ayay su’aashani meel sare kaga jirtaa howlihiisa iyo sidii loo dhimi lahaa inuu ka sii adkaado, sida ay sheegtay Wallström.
Ma jirtaa tallaabo laga qaadi karo oo aan dhaawacayn dalka koonkurta Kuuriya?
–Way adag tahay oo ma muuqato. Quwadda ugu muhiim-san xaaladdan waa dalka Mareeykanka, sidaa daraadeed ayay muhiimad u leedahay inaan khilaafka la sii adkeeyn. Horay wax ugama aanay tarin ereyada kulkulul, sidaa daraadeed waa inaan dawladda Mareeykanka ka codsannaa sidii lagu heli lahaa dhabbo kale ee horay looga sii socon karo oo xaaladda lagu dejin karo.
Dalka Sweden wuxuu ka mid yahay waddammada fara ku t iriska ah ee safaaradaha ku leh dalka Waqooyiga Kuuriya. Ma u tallaab-san karnaa hab aaney dawladaha kale u tallaab-san karin?
–Haa, waxaannu dareemeeynaa in aannu kalsooni buuxda oo nalagu aamin-san yahay ku leennahay. Ajande qarsoon maynaan lahayn. Waxay middaasi ka dhigan tahay in mararka qaarkood war-bixin wax dejisa aannu gudbin karno. Hase yeeshee maahan inaan kaalintayada buun buuninno, sida ay sheegtay Margot Wallström, wasiirka arrimmaha dibadda Sweden oo u warrameeysay laanta wararka idaacadda ee Ekot.